Foodie Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: အစားသောင်းကြမ်းသူ
နေအိမ် > အစားသောင်းကြမ်းသူ
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ဤရွေ့ကားအစဉ်အမြဲငါပျော်မွေ့ကြပါပြီအကောင်းဆုံးကိုဒေသခံဟင်းလျာများအပေါ်မှာငါ့ရှင်ကြီးတွေဟာ, သြစတြီးယား၌ငါ့နေထိုင်စဉ်အတွင်း. ငါနွေရာသီ၌ရှိ၏ 2016 သေးငယ်တဲ့အရွယ်ဒေသခံ NGO မှာအကြှနျုပျ၏ 4-တစ်လအလုပ်သင်များအတွက်. အဆိုပါအလုပ်သင်အတွေ့အကြုံကဒါကြီး, that I got to meet talented…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပတိုက်ကြီးအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်, ဥရောပခရီးသွားအမျိုးအစားတိုင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်း - ပါဝင်သည်အရသာကိုက်. ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးအများဆုံးနှစ်သက်သောပါလိမ့်မည်? What meal pic will have your Instagram racking up 100’s of likes? အံ့သြရပ်တန့်ခြင်းနှင့် munching စတင်ရန်….
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အစားအစာကအရမ်းဘုန်းကြီးတယ်, အထူးသဖြင့်အရသာအစားအစာ. ဥရောပတှငျနထေိုငျသငျသညျကဤမျှလောက်အကြောင်းပြချက်ပေးသည်တဲ့အခါမှာဒါဟာနှင့်အတူစွဲလမ်းခံရဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်! အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများဥရောပ၌ရှိကြ၏, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာအစားကောင်းကြိုက်သူများများမှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ, and so will you…